Tian’ny Mpanao Lalàna Rosiana Tsy Hahazo Hiditra Media Sosialy ny Ankizy, Ary Takiany ny Fisoratana Amin’ny ‘Anarana Tena Izy’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2017 5:23 GMT
Sary: Pixabay, nahitsin'i Kevin Rothrock
Misy volavolan-dalàna vaovao ao Rosia te-handrara ny fananganan'ny ankizy latsaky ny 14 taona kaonty ao amin'ny media sosialy ary mitaky amin'ny olon-dehibe hampiasa ny tena anarany, voamarina avy amin'ny torohain'ny pasipaoro, rehefa misoratra anrana amin'izay sehatra media sosialy tiany idirana ry zareo.
Hanamarika fialana tanteraka amin'ny fomba fanao amin'ny RuNet amin'izao fotoana izao ao izany, sy amin'ny sehatra media sosialy malaza indrindra ao Rosia, dia ny VKontakte, izay tsy itakiana fisoratana anarana amin'ny tena anarany izany.
Ny Antenimiera mpanao lalànan'ny Oblast Leningrad izay misolotena ny faritra lehibebe an'i St. Petersburg, no voatatitra fa hametraka ity lalàna ity ao amin'ny Duma, parlemanta fereralin'i Rosia. Koa satria efa voasoratra amin'izao fotoana izao ny lalàna, dia mety hiatrika fanasaziana ara-panjakana amin'ny fandoavana onitra hatramin'ny 300.000 robla ($5.350) izany.
na dia mbola tsy mazava aza hoe ho tahaka ny ahoana no hampiharan'ny manampahefana ny lalàna, indrindra rehefa eo amin'ny sehatra media sosialy tantanin'ny vahiny izany, ny lalàna dia voatondro hampiharina amin'ny olom-pirenena rosiana sy amin'ny vahiny monina amin'ny tany rosiana, araka ny nolazain'ny gazety Izvestia.
Ny lalàna-drafitra dia hamela ny tanora anelanelan'ny 14 ka hatramin'ny 17 taona hanana kaonty ao amin'ny media sosialy, saingy handrara tanteraka azy ireo tsy hiditra amin'ny vondrona na fiaraha-monina mizara votoaty tsy natao hozaraina amin'ny ankizy, tafiditra amin'izany ny zavatra “majika-maizimaizina”, ny torohay momba ny “fangaro fifohana,” ary ny lazaina ho “propagandy pelaka.”
Tian'ilay lalàna hohamafisina ihany koa ilay fepetra efa nisy izay mandrara ny mpisera aterineto tsy hizara fampahafantarana momba ny fihetsiketsehana an-dalambe “tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny manampahefana”, amin'ny fanazavana miharihary ny maha-heloka bevava izany karazan-javatra tadiavina hozaraina izany. Ary apetraka ho tsy ara-dalàna ihany koa ny mamoaka taratasy nifanoratana tamin'ny mpisera media sosialy hafa ka tsy nahazo fankatoavana avy amin'izany mpisera izany, fepetra iray izay angamba nahazoana aingam-panahy avy amin'ireo fahatafintohinana ara-politika nateraky ny fifandraisana miporitsaka eo amin'ny samy olona fanta-daza nitranga vao haingana.
Raha lany io lalàna io dia hihatra manomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2018.
Maro ireo firenena manerana izao tontolo izao — hatrany Jordania sy Korea Atsimo ka hatrany Zambia [mg] — no efa nampiditra ity lazaina ho tsy maintsy misoratra amin'ny “tena anarana” ity na eo amin'ny sehatra an-tserasera na amin'ny karatra finday SIM, ka misy ny mahomby na tsia. Amin'ireo tranga rehetra ireo, mandresy lahatra ny mpanao lalàna fa hanatsara ny zavatra ataon'ny mpanao heloka bevava an-tserasera ny fampiharana ny lalàna. Saingy manamora ny fanaraha-maso ataon'ny governemanta amin'izay zavatra ataon'ny mpisera aterineto rehetra, tsy ijerena hoe misy zavatra mahavoaheloka bevava ve ataony ny fanangonana ireo torohay ireo. Mety hiteraka olana na fanamby ihany koa ny fitehirizana io karazan-dahatahiry io. Nihemotra tamin'ny fitakiana ny tena anarana rehefa misoratra anarana i Korea Atsimo rehefa niporitsaka noho ny fisovohana lohamilina notantanin'ny fanjakana ny mombamomba ireo mpisera aterineto ampolony tapitrisa tamin'ny taona 2011.
“Tsy misy te-hampiditra sivana na famerana ny fahalalaham-pitenenana eo,” hoy i Vladimir Petrov, depiote iray avy ao amin'ny antenimieran'ny fanaovan-dalànan'ny Oblast Leningrad, tamin'ny Izvestia. “Tsy misy afa-tsy hanatsara ny lanjan'ny fifandraisana virtoaly sy ny hevitry ny tsirairay ny vokatry ny fanamarinana sy ny fanarahamaso manokana ny tena anaran'ny mpisera.”
“Arakaraka ny mahakely ny fialana andraikitra ao anatin'ny tsy fahafantarana anarana no mahatsara azy,” hoy i Vitaly Milonov, depioten'ny “Duma”-mpanjakana nalaza ratsy tamin'ny fitarihan-dalana famolavolana ny lalàna anti-LGBT tao Rosia. “Tsy azo avela hitolo-batana ho an'ireo mpametaeta ankizy, mpampihorohoro ary jiolahy mpanao heloka bevava io tontolo io.”
Nilaza tamin'ny Izvestia i Milonov fa raha tafiditra hodinihina ao amin'ny Duma ny lalàna, dia betsaka ny erijika hahalaniany.